တောင်တရုတ်ပင်လယ် မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း "နို(လ်)"( NOUL )ကြောင့် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး အပါအဝင် နေရာအနှံ့အပြား တွင် မိုးသက်လေပြင်းကျ ၍ ရေကြီးခြင်း ၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင် - Pyit Time Htaung
တောင်တရုတ်ပင်လယ် မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း “နို(လ်)”( NOUL )ကြောင့် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး အပါအဝင် နေရာအနှံ့အပြား တွင် မိုးသက်လေပြင်းကျ ၍ ရေကြီးခြင်း ၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်
By Pyit TimePosted on September 18, 2020
တောင်တရုတ်ပင်လယ် မှ အပူပိုင်း မုန်တိုင်း “နို(လ်)”( NOUL ) ထူးခြား သည့် အခြေ အနေ
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာ နမှ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ြ မန်မာစံတော်ချိန် ( ၀၅:၃၀ )နာရီ အချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း”နို(လ်)”(NOUL)သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၊ ဒါနန်းမြို့(Danang) ၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၈၀)ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင် ကို ဗဟိုပြုနေ ပါသည် ။ အဆိုပါ အပူပိုင်း မုန်တိုင်း”နို( လ်)”(NOUL)သည် အနောက်ဘက် သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ၊ ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်း တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့(Danang)အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင် ပါသည်။ အဆိုပါ အပူပိုင်း မုန်တိုင်း”နို(လ်)”(NOUL)သည် ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် တစ်ဖြည်းဖြည်း အားလျော့သွား ကာ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး၊ (၁၉.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသများ သို့ လေပွေလှိုင်း အဖြစ် ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်း ရပါသည်။
၂။ အဆိုပါ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း”နို(လ်)”(NOUL)၏ အရှိန်ကြောင့် (၁၈.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၂.၉. ၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွင်း နေပြည်တော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင် ပိုင်း)၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့ အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနှင့် နေရာကွက် ၍ မိုးကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင် ပါသည် ။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ ၍ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း”နို(လ်)”(NOUL)၏ အရှိန်ကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာထစ်ချုန်း ရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ လျှပ်တစ်ပြက်ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ သဖြင့် ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် မြေပြိုမှု အန္တရာယ်ကိုလည်းကောင်း ၊ မြစ်ငယ်၊ ချောင်းငယ်များအနီးတွင် နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင် သောကြောင့် ကြိုတင် သတိပြုနေထိုင်ကြ ပါရန် အကြံပြုအပ် ပါသည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း ပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ် ချုန်းရွာပြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန် ပြည်နယ်တို့တွင် ဒေသ အလိုက်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင် လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ကျန်မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၁)ပေခန့်နှင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့တွင် (၅)ပေမှ (၈)ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော်၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယား ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ တွင် မိုးပိုလာနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါ သည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၆၀) ဖြစ်ပါသည်
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
တောငျတရုတျပငျလယျ မှ အပူပိုငျး မုနျတိုငျး “နို(လျ)”( NOUL ) ထူးခွား သညျ့ အခွေ အနေ
မိုးလဝေသနှငျ့ ဇလဗဒေညှနျကွားမှုဦးစီးဌာ နမှ စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျွမနျမာစံတျောခြိနျ ( ၀၅:၃၀ )နာရီ အခြိနျ တိုငျးထှာခကျြမြားအရ တောငျတရုတျပငျလယျပွငျ တှငျ ဖွဈပျေါနသေော အပူပိုငျးမုနျတိုငျး”နို(လျ)”(NOUL)သညျ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ၊ ဒါနနျးမွို့(Danang) ၏ အရှတေ့ောငျဘကျ မိုငျ(၈၀)ခနျ့အကှာ ပငျလယျပွငျ ကို ဗဟိုပွုနေ ပါသညျ ။ အဆိုပါ အပူပိုငျး မုနျတိုငျး”နို( လျ)”(NOUL)သညျ အနောကျဘကျ သို့ ဆကျလကျရှလြေ့ားပွီး ၊ ယနေ့ နလေ့ယျပိုငျး တှငျ ဗီယကျနမျနိုငျငံ၊ ဒါနနျးမွို့(Danang)အနီးမှ ဖွတျကြျောဝငျရောကျနိုငျ ပါသညျ။ အဆိုပါ အပူပိုငျး မုနျတိုငျး”နို(လျ)”(NOUL)သညျ ကုနျးတှငျးသို့ ဝငျရောကျပွီးနောကျ တဈဖွညျးဖွညျး အားလြော့သှား ကာ အနောကျ-အနောကျမွောကျဘကျသို့ ဆကျလကျရှလြေ့ားပွီး၊ (၁၉.၉.၂၀၂၀)ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံအရှတေ့ောငျပိုငျးဒသေမြား သို့ လပှေလှေိုငျး အဖွဈ ရောကျရှိနိုငျသညျဟု ခနျ့မှနျး ရပါသညျ။
၂။ အဆိုပါ အပူပိုငျးမုနျတိုငျး”နို(လျ)”(NOUL)၏ အရှိနျကွောငျ့ (၁၈.၉.၂၀၂၀) ရကျနမှေ့ (၂၂.၉. ၂၀၂၀) ရကျနအေ့တှငျး နပွေညျတျော၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ၊ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျ ပိုငျး)၊ ရခိုငျပွညျနယျ ၊ ကယားပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ နရောစိပျစိပျမှ နရောအနှံ့ အပွား မိုးထဈခြုနျးရှာပွီး၊ ဒသေအလိုကျမိုးကွီးခွငျးနှငျ့ နရောကှကျ ၍ မိုးကွီးခွငျးမြား ဖွဈပျေါနိုငျ ပါသညျ ။
၃။ သို့ဖွဈပါ ၍ အပူပိုငျးမုနျတိုငျး”နို(လျ)”(NOUL)၏ အရှိနျကွောငျ့ မိုးသညျးထနျစှာထဈခြုနျး ရှာသှနျးခွငျးနှငျ့အတူ လပွေငျးတိုကျခတျခွငျး၊ လြှပျတဈပွကျရကွေီးခွငျး၊ မွပွေိုခွငျးမြား ဖွဈပျေါနိုငျပါ သဖွငျ့ ကုနျးမွငျ့ဒသေအနီးတှငျ နထေိုငျသူမြားအနဖွေငျ့ မွပွေိုမှု အန်တရာယျကိုလညျးကောငျး ၊ မွဈငယျ၊ ခြောငျးငယျမြားအနီးတှငျ နထေိုငျကွသူမြားအနဖွေငျ့ ရကွေီး၊ ရလြှေံမှုမြား ဖွဈပျေါနိုငျ သောကွောငျ့ ကွိုတငျ သတိပွုနထေိုငျကွ ပါရနျ အကွံပွုအပျ ပါသညျ။
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအ‌ခွအေနေ။ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျးတို့တှငျ မုတျသုံလေ အားကောငျးနပွေီး၊ ကနျြဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတှငျ မုတျသုံလေ အားနညျးနပေါသညျ။
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအောကျပိုငျးနှငျ့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီးတို့တှငျ နရော ကှကျကြား၊ နပွေညျတျော၊ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအထကျပိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကခငျြပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတို့တှငျ နရောကြဲကြဲ၊ ပဲခူးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျး ပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)နှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတို့တှငျ နရောစိပျစိပျနှငျ့ ကနျြတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျတို့တှငျ နရောအနှံ့အပွား မိုးထဈ ခြုနျးရှာပွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျ ပွညျနယျတို့တှငျ ဒသေ အလိုကျနှငျ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးတှငျ နရောကှကျ၍ မိုးကွီးနိုငျပါသညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။
မွဈဝကြှနျးပျေါ၊ မုတ်တမကှေ့၊ မှနျ-တနင်ျသာရီ ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျ လယျပွငျတို့တှငျ တဈခါတဈရံ မိုးသကျလပွေငျးမြားကရြောကျပွီး လှိုငျးကွီးနိုငျပါသညျ။ မိုးသကျလပွေငျးကစြဉျ ရပွေငျ/မွပွေငျလသေညျ တဈနာရီလြှငျ (၃၅)မိုငျအထိ တိုကျခတျနိုငျပါသညျ။ ကနျြမွနျမာ့ပငျလယျပွငျတှငျ လှိုငျးအသငျ့အတငျ့ရှိမညျ။ လှိုငျးအမွငျ့မှာ မွဈဝကြှနျးပျေါ၊ မုတ်တမကှေ့၊ မှနျ-တနင်ျသာရီကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျ နှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျ တို့တှငျ (၈)ပမှေ (၁၁)ပခေနျ့နှငျ့ ရခိုငျကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျ တို့တှငျ (၅)ပမှေ (၈)ပခေနျ့ရှိနိုငျပါသညျ။
နပွေညျတျော၊ မကှေးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီ တိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကယား ပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့ တှငျ မိုးပိုလာနိုငျပါသညျ။
နပွေညျတျောနှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။
ရနျကုနျမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ မိုးတဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျထဈခြုနျးရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။
မန်တလေးမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာနိုငျပါ သညျ။ ရှာရနျရာနှုနျး(၆၀) ဖွဈပါသညျ
မိုးလဝေသနှငျ့ ဇလဗဒေညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာန
Previous post နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲများ စီးရန် မှာယူထား သည့် အီတလီနိုင်ငံထုတ် Leonardo AW-139 ရဟတ်ယာဉ် အသစ်ကြီးရောက်ရှိ
Next post ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင်များ ပိုင်ရှင် ဦးခင်မောင်ဦး တခြားရောဂါ အခံမရှိပဲ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ၂၄ နာရီ အတွင်း မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ ဟု သိရ